Wallapop anaghị arụ ọrụ Kedu ihe m nwere ike ịme? | Gam akporosis
Ignacio Lopez | 10/05/2021 18:00 | Ngwa gam akporo
Wallapop aghọwo otu n'ime nyiwe kachasị eji eme ihe mgbe ọ bịara ree ihe nile anyi jizi. Agbanyeghị, ọ bụghị ikpo okwu na-arụ ọrụ oge niile na n'ọtụtụ oge ọ na-akwụsị ịrụ ọrụ ma ọ bụ na-eme ya n'ụzọ na-ezighi ezi.
Fọrọ kemgbe ya igba egbe, otu n'ime nsogbu ndị na-emetụta ikpo okwu mgbe niile metụtara ya Integrated ozi n'elu ikpo okwu, otu ikpo okwu nke na-anaghị enye gị ohere izipu ma ọ bụ ịnata ozi ma ọ bụ mgbe ọ mere, oge gafere.
Nsogbu ndị ọzọ, nke metụtara ọrụ nke ikpo okwu a, bụ aghụghọ, ọ bụ ezie n'inwe ezi uche, Ọ dị mfe ịchọpụta ngwaahịa ndị ahụ ụfọdụ ndị ọrụ chọrọ iji nweta ego dị mfe.
N'okpuru ebe anyị na-egosi gị ihe ngwọta maka ụfọdụ nsogbu ndị kachasịkarị anyị nwere ike ịchọta site na iji ngwa Wallapop maka ngwaọrụ mkpanaka, mana ọ bụghị n'ebughị ụzọ tụọ aro na melite ngwa gaa na ụdị kachasị dị na Storelọ Ahịa Play.
Ọ bụrụ na Wallapop enyochala na ngwa nwere a nche mgbochi, ọ ga-ekwe omume na ụlọ ọrụ ahụ egbochila iji ngwa ahụ na nsụgharị ndị gara aga iji dozie nsogbu ahụ.
Ọ bụ ezie na anyị gam akporo ọnụ na-emekarị akpaghị aka melite arụnyere ngwa, O yikarịrị ka ị kwụsịrị ha n'amaghị ama, n'ihi ya ọ dịghị ewute ya ịlele ma ọ bụrụ na anyị nwere mmelite na-echere iji wụnye ya maka ngwa a.
1 Ezigaghị ozi ma ọ bụ anaghị abata
2 Ngwa a enweghi intaneti
3 Emechiela akaụntụ m
4 Enweghị m ike ịnweta ngwa ahụ
5 Enwetara m njehie mgbe m na-eziga mgbasa ozi
6 Enweghị m ike bulite foto na mgbasa ozi
7 Enweghị m ike ịnweta nkọwapụta ngwaahịa
8 Ọ dịghị ngwaahịa gosiri
9 Kagbuo mgbasa ozi m
10 Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta azịza nke nsogbu ahụ
Ezigaghị ozi ma ọ bụ anaghị abata
Otu n'ime nsogbu ndị a na-ahụkarị n'elu ikpo okwu a, dịka m kwuru n'elu, metụtara ozi, ozi, ma ọ bụ ezitebeghị, nnata anaghị enweta ma ọ bụ ha efuo ụzọ.
E wezụga nsogbu ndị a na-enwekarị na ikpo okwu a na usoro nkwukọrịta nke dị n'etiti ndị na-ere ahịa na ndị na-azụ ahịa, anyị kwesịrị ịga tụfuo usoro ọzọ nke ahụ nwere ike imetụta ọrụ nke ngwa ahụ yana metụtara anyị, dị ka njikọ ịntanetị adịghị ike.
Ọ bụrụ na njikọ gị dị mma, gbanyụọ Wi-Fi ma jiri data mkpanaka ma ọ bụ ntụgharị iji chịkwaa na nsogbu na-akpali gị njikọ internetntanetị. Ọ bụrụ na edozibeghị nsogbu ahụ, nhọrọ ọzọ anyị ga-anwa ịnwa bụ ịnweta site na nsụgharị weebụ, nsụgharị weebụ nke na-adịghị arụ ọrụ dị ka nsụgharị mobile, ma nke ahụ nwere ike inyere anyị aka n'ọnọdụ ndị a.
Ngwa a enweghi intaneti
Agbanyeghị na ọ nwere ike iyi ihe nzuzu, enweghị ọtụtụ ndị ọrụ na mgbe Wallapop anaghị arụ ọrụ, ha anaghị echegbu onwe ha ịlele nke mbụ ọ bụrụ na ha nwere njikọ ịntanetị.
Ngwa a na-arụ ọrụ 100% online, ebe ọ na-adịghị echekwa data nke ụdị ọ bụla na ngwaọrụ anyị, ma ndị metụtara ngwaahịa anyị na-ere ma ọ bụ ndị anyị na-eso, yana data metụtara aha anyị, ọnụọgụ nke ihe anyị zụtara ma ọ bụ ree ...
Emechiela akaụntụ m
Ọ bụrụ na anyị agbanwebeghị paswọọdụ nke onye mmekọ Wallapop na Facebook ma ọ bụ Gmail, ọ ga-abụ na n'ihi ihe kpatara ya, akaụntụ anyị agbanyụọla ebumnuche ma ọ bụ na mberede site na ikpo okwu.
Ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ ịnwale nweta site na kọmputa site na weebụsaịtị Wallapop. O kwere omume na njikọta n'etiti sava ahụ na ngwa ahụ na-ada n'oge ahụ, yabụ ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnweta ya site na ihe nchọgharị, nsogbu ahụ adịghị na akaụntụ anyị, mana na ikpo okwu n'onwe ya.
N'okwu a, naanị ihe anyị nwere ike ime bụ chere ka nsogbu dozie na-emetụta ọrụ nke ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịnweta site na weebụsaịtị ahụ, anyị nwere ike ịchịkwa na ọ bụ nsogbu ọrụ aka nke ikpo okwu, yabụ a ga-amanye anyị banye na ikpo okwu, site na email support.es@wallapop.com, iji chọpụta ihe kpatara nke kpatara na akaụntụ anyị enweghị ọrụ.
Enweghị m ike ịnweta ngwa ahụ
Ọ bụrụ na ị jiri akaụntụ Gmail ma ọ bụ Facebook iji nweta ikpo okwu a na ị gbanwere paswọọdụ nso nso a, ihe ngwọta iji nwee ike ịnweta ngwa ahụ ọzọ mgbe ọ meghere, bụ ihichapụ ngwa site na ngwaọrụ anyị, tinye ya ma nweta ya ọzọ.
Mgbe ị na-eji akaụntụ Facebook ma ọ bụ Gmail anyị, windo ihe nchọgharị ga-emepe, ihe nchọgharị nwere ike ịnwe echekwara okwuntughe anyi jiri na mbuN'ihi ya, ihe kachasị mma bụ ihichapụ ngwa ngwa Wallapop ma jiri ya data niile echekwara na ya.
Ikwesiri icheta na ngwa ahụ anaghị echekwa na ngwaọrụ anyị enweghị ụdị data nke isiokwu niile anyị nwere maka ọrịre, yana obere ọ na-echekwa data nke akaụntụ anyị, nke ndị na-ere ahịa nke anyị na-agbaso, nke isiokwu anyị nwere ọkacha mmasị ... Ozi niile nke anyị Enwere ike ịchọta akaụntụ Wallapop na sava nke ụlọ ọrụ a.
Enwetara m njehie mgbe m na-eziga mgbasa ozi
Wallapop, dị ka ihe ọ bụla ahịa ahịa n'elu ikpo okwu, nwere usoro ntuziaka ndị ọrụ niile ga-emerịrị ma ọ bụrụ na ha chọrọ iji ya, ụkpụrụ nduzi ndị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-agụ ya na anyị na-ama mgbe anyị zutere nsogbu n'elu ikpo okwu.
Ọ bụrụ na ngwa ahụ weghachite njehie mgbe anyị chọrọ ibipụta otu isiokwu, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịlele na anyị jupụtara na mpaghara ọ bụla achọrọ na-ejighi emojis ma ọ bụ mkpụrụedemede pụrụ iche ọ bụghị n'isi ma ọ bụ na nkọwa. Ọ bụrụ na anyị jupụtara na mpaghara niile, ọ ga-ekwe omume na nsogbu ahụ metụtara, ọzọ, na ngwa ma ọ bụ na njikọ nke sava ahụ.
N'okwu a, anyị ga-aga n'ihu dịka m kwuru na ngalaba ndị gara aga. Ọ bụrụ na, ọbụlagodi, otu njehie ozi ahụ na-aga n'ihu na-apụta, ihe kachasị mfe bụ wepu ngwa, regharịa ekwentị, regharịa ngwa ma gbalịa ọzọ ka ị bulite ngwaahịa anyị chọrọ ire.
Enweghị m ike bulite foto na mgbasa ozi
Ngwa niile anyị wụnyere na ngwaọrụ gam akporo anyị chọrọ ịnweta ọbá akwụkwọ ihe oyiyi anyị, ga-ebu ụzọ, rịọ ikike n'aka onye ọrụma ọ bụghị, ị gaghị enwe ike ịnweta ọdịnaya ahụ.
N'ihe banyere Wallapop, anyị ga-akwado nnweta ebe ọ bụ ebe a ka anyị ga-enweta onyonyo nke ngwaahịa anyị chọrọ ire. Ọ bụrụ na anyị achọghị inye gị ohere, anyị nwere ike ịhọrọ jiri igwefoto nke ọnụ anyị site na ngwa ahụ, usoro anyị ga-enyekwa ikike na mbụ.
Iji mee ka Wallapop nwee ike ịnweta igwefoto nke ngwaọrụ anyị na ọba foto anyị, anyị ga-anakwere ozi ọ na-arịọ maka ya. Ọ bụrụ na egosighi ozi ahụ ọzọ, n'ihi na anyị enyebeghị ikike na mbụ, anyị ga-abanyerịrị Ntọala - Mmemme - Wallapop ma rụọ ọrụ switches kwekọrọ na igwefoto na gallery.
Ọ bụrụ na anyị na-ebipụta mgbasa ozi na kọmputa, anyị ga-eburu n'uche na ikpo okwu ahụ naanị kwe ka ibugote onyonyo ndị na-erughị 1MB - 1.000 KB.
Enweghị m ike ịnweta nkọwapụta ngwaahịa
A na - achọta ọdịda ọzọ nke ikpo okwu a mgbe anyị chọrọ ịnweta nkọwa nke ngwaahịa na ozi “Ọ nwere ihe na-agaghị nke ọma”. Nke a bụ n'ihi na onye mgbasa ozi wepụrụ mgbasa ozi ahụ, mana ọ na-aga n'ihu na-egosi na nchekwa nke sava ụlọ ọrụ ahụ.
O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ị mechie ngwa ahụ, malitegharịa ọnụ gị, nweta site na weebụ, nsogbu ahụ ga-aga n'ihu n'ihu ruo mgbe emelitere ọdịnaya nke oghere ahụ. Nsogbu a na-apụtakarị mgbe ehichapụ otu ihe na nso nso a, ya bụ, nkeji ole na ole gara aga.
Ọ dịghị ngwaahịa gosiri
Ọ bụrụ na anyị abanye na ngwa ahụ na enweghị edemede gosipụtara yana ozi njehie na-eso ya, ọ bụ nsogbu na sava, ya mere, naanị ihe ga-eme bụ ịme ihe ọzọ wee chere ka ikpo okwu rụọ ọrụ ọzọ.
Kagbuo mgbasa ozi m
Dịka m kwuru na ngalaba gara aga, Wallapop nwere usoro ntuziaka nke onye ọrụ ọ bụla ga-agbaso iji gbochie ikpo okwu ahụ wepụ mgbasa ozi anyị biputere.
Ihe atụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ na-ere ihe iPhone na anyị na-etinye na mgbasa ozi na ọ nwere jailbreak, ikpo okwu ga-ewepu mgbasa ozi na akpaghị aka ma zitere anyị ozi na ihe ndị mere dugara ikpo okwu iji wepu mgbasa ozi ahụ. Ọ dị egwu na ikpo okwu a anaghị ekwe ka ụdị mgbasa ozi a ebe ọ bụ ịhapụ iPhone (jailbreak) abụghị iwu na mba ọ bụla.
Dị ka nsogbu a na-enweghị isi na jailbreak, anyị nwere ike ịchọta ndị ọzọ hà nhata ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụ na anyị achọpụta na nke ahụ, anyị ga-agụgharị ederede ahụ chọọ okwu na-anaghị agafe ihe nzacha Wallapop nyochaa ma wepu ya ma ọ bụ dochie ya na nke yiri ya.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta azịza nke nsogbu ahụ
Methodzọ ọtụtụ ndị ọrụ na-amaghị na nke ahụ na-abụkarị ngwa ngwa ngwa karịa ịkpọtụrụ anyị site na email, bụ site na Twitter na Facebook.
Ọtụtụ bụ ụlọ ọrụ ndị zigara akụkụ nke ọrụ ndị ahịa na Twitter na Facebook, maka ngwa ngwa nke a na-eche site na ikwe ka mkparịta ụka nke onwe n’etiti otu abụọ site na ozi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Wallapop anaghị arụ ọrụ Kedu ihe m nwere ike ịme?
Onye ọrụ gbara dijo
Ọ bụrụ na ha gbanyụọ akaụntụ gị, ị f ********************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ***********.
Ha anaghị enye gị ihe kpatara ya, Enweghị ọrụ ndị ahịa.
Aka ọrụ abụọ nwere nkwarụ maka m maka "inwe mmekọrịta na onye ọrụ na-enyo enyo", ọ bụ naanị ihe m nwetara, ha enweghị ike inye gị ozi ndị ọzọ n'ihi "nzuzo". Ha agaghị agwa gị ihe ọ bụla, ha agaghị agwa gị mgbe ha gbanyụrụ akaụntụ gị, mana ozugbo emere ya ọ dịghị mkpa ihe ị gụrụ ma ọ bụ ihe ị na-eme: ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe, ị tufuru ohere gị, ahịa gị, aha gị, wdg. , na ị nweghị ike iji otu akaụntụ ọzọ nke e-mail, ọ na-abanye na ndepụta ojii.
Zaghachi Onye na-ere ọkụ
Cubot X50: mbupute nke ọhụụ ọhụrụ na igwefoto quad 64 MP